China Yakanaka mutengo china Wholesale chitsva chirimwa chitsva ginger vagadziri uye vanotengesa | AGR
nyowani ginger ine detoxifying athari sterilization, ginger mune iyo ginger mumuviri, izvi zvinogona kuburitsa antioxidant enzyme, ine simba rakasimba rekubata neoksijeni radicals, asi zvakare inoshanda kupfuura vhitamini E.
Ginger inogona kukurudzira gastric mucosa, ichikonzera vasomotor Center uye inonzwira tsitsi nerve reflex yekumutsa pabonde, kukurudzira kutenderera kweropa, kukurudzira dumbu basa, kumarwadzo emudumbu, kudikitira, antipyretic athari. Jiang zvakare inowedzera kuchengetedzwa kweiyo gastric muto uye mudumbu peristalsis, kubatsira kugaya; ginger zingiberene, zingerone pane basa rakajeka pakumisa kurutsa.
Ginger yakanyanyisa kutadzisa fungal ganda uye kuuraya Trichomonas vaginalis maitiro, kurapa akasiyana siyana carbuncle kuzvimba kurwadziwa.
Ginger inhibit kenza maseru chiitiko, kudzikisira huturu hwecancer, inogona kutamba anti-cancer athari.
Ginger ine kudikitira kunodzikamisa, inodziya chikosoro chemapapu, detoxification, inogona kurapa kutonhora kwakanyanya, dumbu rinotonhora, kurutsa, kukosora kutonhora, kurwadziwa mudumbu, manyoka, uye zvimwe zvirwere muhuswa hwegakanje.
Zvemusoro wenyaya wekurasikirwa ginger wakasiyana mhando dze ginger
Ginger chirimwa chinotumbuka uye zita rayo repamutemo ndiZingiber officinale. Iyo rhizome, inonyanya kuzivikanwa semudzi, ndizvo zvaungangodaro uchiziva nezvazvo. Midzi yacho inotapira uye mhiripiri munonaka, iine mishonga yakawanda. Iyo inoshandiswa pasirese pasirese mune zvekugadzirira uye zvemakiriniki ekushandisa-zvese nechikonzero chakanaka
Ginger chirimwa chisingaperi chinonyanya kudyarwa pakati, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kusvika kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweChina, uye zvakare inowanzo kurimwa munzvimbo dzinopisa dzeAsia. Iyo rhizome inoshandiswa pakurapa, uye zvigadzirwa zvitsva kana zvakaomeswa zvinogona kushandiswa sekubika zvigadzirwa kana kugadzirwa kuita mapundu neshuga ginger. Mafuta anonhuwirira anogona kutorwa kubva kumadzinde, mashizha, uye ma rhizomes, uye anoshandiswa mukudya, zvinwiwa uye zvinonhuwira zvekuzora.
Ginger nyowani inogona kuburitsa zvinonaka uye ive nemhedzisiro inobatsira yekudzora mabhakitiriya, kuchengetedza moyo mune yakanaka uye hutachiona.
Pashure: yakachipa mutengo muhuwandu yakachena organic garlic mesh bhegi mutengo wegariki
Zvadaro: yemhando yepamusoro mutengo wakanakisa Shandong nyowani zvinonhuwira jena yeyero ginger
Best Price Chinese Export New Chirimwa Fresh Purple ...